Incest ဆွေမျိုးနီးစပ် လက်ထပ်ခြင်း October 11, 2010 10:36 AM
I found your website and readalot of medical knowledge so I respect you much. My problem is about incest not real sex with relatives but I prefer sex on my relatives such as my aunt, sisters, etc. So I do masturbation while I imagine them with full satisfaction than other women. Sometimes, I use their panties for my masturbation. I am 28 yr male, single, Muslim. Can I continue it? ဆွေမျိုးနီးစပ် အချင်းချင်းယူတာကို Incest ခေါ်တယ်။ မြန်မာလို ဝေါဟာရအနေနဲ့ မသိပါ။ တသွေးထဲက မွေးလာသူတွေ နဲ့ (မွေးစာတာ အပါအဝင်) တအိမ်ထဲ နေသူတွေလို့ ကွဲသေးတယ်။ အမျိုးအစားတွေထဲမှာ အမျိုး-လူကြီး နဲ့ အမျိုး-ကလေး၊ အမျိုး-ကလေး နဲ့ အမျိုး-ကလေး၊ အမျိုး အရွယ်ရောက်ချင်း၊ တဝမ်းကွဲ အမျိုးချင်း။
Incest သုတေသန လုပ်တာတွေက ယေဘုယျ ချဘို့ ခက်တယ်။ အကြမ်းဖျင်း လူဦးရေ ၁ဝ-၁၅% လောက်မှာ ဒီစိတ်မျိုး ရှိတတ်ပြီး၊ ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ဖြစ်တာက ၂% လောက်ရှိမယ်လို့ ယူဆကြတယ်။ ဖခင်-သမီး ဖြစ်ပျက်မှုက အများဆုံး။ မိခင်-သားက အနဲဆုံး။ အကို-နှမ မနဲလှဘူး။ မောင်နဲ့နှမ အကြား ဖြစ်တာမျိုးက မိဘနဲ့ သားသမီးကြား ဖြစ်တာထက် များတယ်။ အရွယ်မရောက်သူ အပါအဝင် ငယ်သူအပေါ် စော်ကားမှုမျိုးက ရေရှည်သဘော များတယ်။ Inbreeding မျိုးဗီဇ တူသူအကြား အိမ်ထောင်ပြုရင် Genetic disorder မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်နဲ့ ကလေးတွေ မွေးတတ်တယ်။ မျက်နှာ နှစ်ခြမ်း မတူတာ၊ လူကောင် သေးတာ၊ ခုခံအားစနစ် ကောင်းကောင်း မလုပ်တာ၊ သား-သမီး နည်းတာတွေ ဖြစ်မယ်။ မိဘ+သားသမီး = ၂၅%၊ မောင်+နှမ = ၂၅%၊ အဖေတူ+အမေကွဲ၊ မအေတူ+အဖေကွဲ = ၁၂့၅%၊ ဦးလေး+တူမ၊ အဒေါ်+တူ = ၁၂့၅%၊ မောင်+နှမ တဝမ်းကွဲ = ၆့၂၅%၊ ဦးလေး+တူမ တဝမ်းကွဲ = ၆့၂၅%၊ မောင်+နှမ နှစ်ဝမ်းကွဲ = ၁့၆% မှာ လာဖြစ်နိုင်တယ်။
သမိုင်းမှာလဲ နမူနာတွေ ရှိခဲ့ဘူးတယ်။ ရိုမန်-အင်ပါယာ Caligula ကနေ Julia Livilla, Drusilia, Agrippina the Younger ဆိုတဲ့ နှမ-တူမ သုံးယောက်လုံးကို ယူခဲ့တယ်။ အင်္ဂလန်က Queen Victoria နဲ့ Prince Albert တို့လဲ တဝမ်းကွဲတွေ။ ဥရောပ ဘုရင်တွေရော မြန်မာဘုရင်တွေပါ သွေးသား တော်စပ်သူတွေကို မိဘုရား မြှောက်တာ နန်းတွင်း အစဉ်အလာ Intermarriage ရှိခဲ့ကြတယ်။ နာမယ် အကြီးဆုံး ဆိုရမှာက House of Habsburg ဖြစ်တယ်။ ရာစု ၆ စုတိုင် အမျိုးချင်း လက်ထပ်တာကြောင့် “မေးရိုးက ရှေ့ငေါထွက်နေတာ” ကို Austrian lip လို့ ခေါ်တယ်။ စပိန်ဘုရင် Charles II ဟာ အစားတောင် သူများလို ဝါးမရတော့ဘူး။ မျိုးဗီဇ ဝေးတာကို Exogamy ခေါ်တယ်။ Gene (ကော်ပီ) ဖြစ်ဘို့ အခွင့်အလမ်း နည်းလို့ ပေါင်းသင်း ထိုက်တယ်။ Iceland က deCODE genetics company ကနေ ၃ ဝမ်းကွဲတော်သူတွေဟာ မျိုးစပ်လို့ အောင်မြင်မှု အများဆုံးလို့ ထုတ်ပြန်တယ်။ အိုက်စလန် ဆိုတာ သေးငယ်လွန်းလို့ အမျိုးနီးစပ် လက်ထပ်ကြတာ များတာကိုး။ Genetic sexual attraction (GSA) ဆိုတာလဲ ရှိသေးတယ်။ အမျိုးတော်ပေမဲ့ ကြီးမှ ပြန်တွေ့တဲ့အခါ Sexual attraction ဖြစ်ပေါ်မှုကို ပြောတာပါ။ ဆွဲဆောင်မှု သာမက Trustworthy ယုံကြည်မှုလဲ ရှိကြတယ်လို့ မှန်းရတယ်။ “အိုးချင်းထား အိုးချင်းထိ၊ ကြိုးချင်းထား ကြိုချင်းငြိ” ဆိုတာနဲ့ မတူဘူး။ Incest ဟာ “တရား မဝင်ဘူး၊ ဘာသာရေးက ခွင့်မပြုဘူး၊ မလိုလားအပ်တဲ့ Taboo ဖြစ်တယ်၊” လို့ နားလည် လက်ခံကြတယ်။ လူမှုရေး အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ဘာသာရေးအယူတွေမှာ ကွဲပြားမှုတော့ ရှိတယ်။ ရှိသမျှ ဘာသာ ပေါင်းစုံက တားမြစ်မှု အမျိုးမျိုး လုပ်ထားပေမဲ့ တခုနဲ့တခု မတူဘူး။ Roman Catholic Church က အတင်းကြပ်ဆုံးဘဲ။ Eastern Orthodox Church က ၂ ဝမ်းကွဲအထိ ခွင့်မပြုဘူး။ Anglican Communion က ၁ ဝမ်းကွဲကို လက်ထပ်ခွင့် ပြုတယ်။ Islamic ကတော့ ဖအေရဲ့မိန်းမ (မိခင်နဲ့ မိထွေး)၊ နှစ်ဘက်က အဒေါ်၊ နှမအရင်း၊ ဖအေတူ-မအေတူ နှမ၊ တူမ၊ သမီး၊ (မအေကို ယူပြီးရင်) မယားပါ-သမီး၊ ချွေးမတွေကို ယူခွင့်မပြုဘူး။ လက်တွေ့ဘဝမှာ ၂ဝဝ၇ နိုဝင်္ဘာ ၂ဝ ဘီဘီစီ သတင်း တပုဒ်မှာ အိန္ဒိယ၊ အနောက် ဘင်္ဂလားမယ် သမီးအကြီးကို ယူတာဟာ Divine sanction အလာရှင် အလိုတော်ရလို့ Afazuddin Ali ကနေ သူ့မိန်းမကို ပြောတယ်။ မိန်းမကလဲ တရာရုံးမှာ အဲလိုပြောတာ လက်ခံတယ်လို့ ထွက်ဆိုတယ်။ ရွာသားတွေကတော့ ဒေါသထွက်ပြီး ခေါင်းဖြတ်ချင်ကြတယ်။ တရားရုံးကလဲ သူ့အာဏာစက် မဟုတ်လို့ အဆုံးအဖြတ် မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ မိသားစုဟာ တခြားနေရာ ရွေ့ပြီး ကနေ့ထက်ထိ နေထိုင် ပေါင်းသင်း နေကြဆဲဘဲ။ Hindu ဟိန္ဒူတွေက ဒါကို ပြင်းပြင်းထံထံ ဆန့်ကျင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တောင်ပိုင်း (ဒရာဗီဒီယန်) တွေကတော့ တူမကို ယူတာ လက်ခံတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ ၅ ပါးသီလ နဲ့ မဂ္ဂင်-ရှစ်ပါးအရ Sexual misconduct လို့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ တားမြစ်မှုတွေ ပါရှိနေတယ်။ သမားရိုးကျ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ-စိတ်ပညာ သီအိုရီက “ကလေးငယ် ၃-၅ နှစ်သား အရွယ်မှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင် မိဘကို Incestuous desires ဒီသဘောဆောင်တဲ့ တွယ်တာမှု ဖြစ်တယ်” လို့ ဆိုတယ်။ ဂရိ Oedipus Rex ကို အစွဲပြုပြီး သားကနေ မိခင်အပေါ် စိတ်ညွှတ်တာကို Oedipus complex လို့ ခေါ်တယ်။ မေးတဲ့သူရဲ့ Masturbation အဆင့်ဟာ “မနောကံ” တခုထဲ ရှိသေးတယ်။ ပြင်လို့ရတယ်။ လူ အတော်များများမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမှား တခုမဟုတ်တခု ရှိခဲ့တတ်ကြတယ်။ တချို့က စိတ်အထူးကု ဆရာဝန် ဆိုတာ ကြားတောင် မကြားဘူးပေမဲ့၊ ပျောက်ကင်း သွားကြတယ်။ ဆုံးမစကားတခု ရှိတယ်။ “မစားကောင်းသော အသီး”။ ဆွေမျိုး ရင်းခြာ၊ သူများ သားမယား၊ အရွယ် မရောက်သူတွေကို မကျူးလွန်အပ်သူလို့ လူတိုင်းမှာ “အသိ” ရှိကြတာပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘာလို့ ဖြစ်ကြသလဲ။ “စိတ်” ဟာ Special senses လို့ခေါ်တဲ့ အကြား၊ အမြင်၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အထိအတွေ့ ဆိုတဲ့ အာရုံငါးပါးမှာ နစ်မျော-မွေ့လျော်-ပျော်ပါးလေ့ရှိတယ်။ အာရုံငါးပါးအပြင် လူလူချင်း မတူကြတာက မျိုးဗီဇ၊ ဟော်မုန်း-ဆေးဝါး အပြင် ကာလံဒေသံ ဆိုတာလဲ အရေးပါသေးတယ်။ ဇာတ်တော် တခုထဲမယ် ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင် နှစ်ဦးထဲ အတူရှိနေရင် ဖေါက်ပြန်စိတ် ဆိုတာ ဆွေမျိုး တော်သော-မတော်သော ဖြစ်တတ်တာကို မိခင်ကနေ သားကို ပညာပေး ဆုံးမဘူးတယ်။ “အဆုံးအမ” တည်လို့ ဘာမှ အမှားအယွင်း မဖြစ်ဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို စွဲလမ်း-နှစ်လိုမှု၊ ကာယကံမြောက်မှု ဆိုတာတွေက အဲလို အကြောင်းတွေကနေ ဖြစ်တာဘဲ။ လူနဲ့ တိရစ္ဆာန် ကွဲပြားတာက ဒီနေရာမှာပါ။ လူမှာ “လူ့စည်း” ဆိုတာ ရှိကြရတယ်။ ဘာသာရေး-စည်း၊ လူမှုရေး-စည်း ဆိုတဲ့ အခြေခံနဲ့ အကျယ်ပြန့်ဆုံး စည်းတွေသာမက အသင်းအပင်း-စည်းကမ်း၊ ကျောင်း-စည်းကမ်း စတာတွေလဲ ရှိသေးတယ်။ သစ္စာရည်သောက်၊ သွေးဖေါက်သစ္စာဆို လုပ်တတ်ကြသလို တချို့ကြ သံမဏိ-စည်းကမ်း လို့တောင် ခေါ်တဲ့ ဖေါက်ရင် ပြစ်ဒဏ် ကြီးကြီးမာမားနဲ့ တားတာမျိုးလဲ ရှိတယ်။ LTTE တွေဟာ လည်ပင်းမှာ Cyanide tube ဆွဲကြရတယ်။ စည်းမတူ၊ နည်းမတူ၊ လူလူချင်း မတူကြပါ။ တိုက်နယ် ဆရာဝန်ဘဝတုံးက ရွာတရွာမှာ ဖအေ-သမီး ပေါင်းသင်းတာကို တွေ့ခဲ့ရဘူးတယ် နယ်သူ-နယ်သားတွေက Taboo ကျိန်စာသင့်တယ်လို့ မှတ်ယူကြတယ်။ မိုးအုံ့ရင် ခွေးစားခွက်နဲ့ ထမင်းစားစေတယ်။ မိုးကြိုးပြစ်မှာ စိုးလို့တဲ့။ Liberal သမားတွေဟာ အများစုက အစဉ်အလာအရ လက်ခံတာတွေ အပါအဝင် ပယ်ချင်တာ မှန်သမျှ ပယ်ချင်ကြတယ်။ သူတို့နဲ့ မတူရင် ခေတ်ဟောင်း နောက်မြီးဆွဲလို့ သမုတ်ကြတယ်။ ဒီ ကျန်းမာရေး ပြဿနာမှာ သေခြာတာတခုက Taboo ကြောင့် Incest နည်းစေပါတယ်။ Dr. တင့်ဆွေ
၁၃-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ Posted by
လှိုင်သာယာက မမ လှိုင်သာယာက မမတဲ့ movie ထမိန်အပြာလေးနဲ့အောက်ကလင့်မှာကြည့်ပါ blog - http://q.gs/7ci7U - ပေးထာတဲ့ Link ကို နှ...
Raped by Saitan (Diperkosa setan) (2010) ...
TOKYO SPECIES (2)
Malena (2000) DVDRip MKV 400MB (18+) ...
blambo movie (4)
blambo movie (3)
blambo movie (2)
blambo movie (1)
bollywood bath video
ညီလေးအတွက်မွေးနေ.လက်ဆောင်ပါ (rathyum kg lay)
Hot Couple Fashion: Ye Deight and Ph...
Ei Phyo Cherry in Hot Colorful Fashi...
May Sweet – စင်ကာပူတွင်ေ...
စ လည် ဆုံးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ARV မျောက်ကိုက်၍ ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးထို...
Evening primrose oil ညနေခင်း နှင်းဆီ Mar 12, 20...
Sleep disorders မအိပ်ဘဲနေ အသက်မရှည် (၂)
Incest ဆွေမျိုးနီးစပ် လက်ထပ်ခြင်း ...
Epididymitis and Orchitis ကျား အစေ့-...
လင်ကြီးငုတ်တုတ်နဲ့( ၂ )
March 26, 2012 Photos: Miss Myanmar 2012 Comp...
Photos: Queen of V Fashion 2012 Beau...
Photos: "3 Plus 3" Live Music Show @...
Myanmar Hot Actess Moe Hay Ko သင်္ကြန်အကြိုပုံတွေပါ
Sex and Zen (1992) (2010) Sex ...
sex fair video
Photos: Forever Gem Opening Fashion Show @ Juncti...
Photos: Forever Gem Opening Event & Fashion Show ...
Jenny Perform At MNL Grand Royal 200...
ကဲ လာပါပြီဗျာ အသစ်လေး ဘယ်လိုလဲ ကြိုက်လား
BHG WAS HERE !! GhostArea...
Thazin Vs Thinzar in Swimwear: Who'd...
New Face Model Thun Than Thar: Cutti...
Chinese TV Presenter ...
homemade vietnam (2)
homemade vietnam (1)
asian girl and black guy (2)
asian girl and black guy (1)
dancer lady video
Celebrity Family: Rzarni and One's L...
Couple Fashion: Nay Toe and Wutt Hmo...
Model Nann Thiri Maung: Sexy in Shor...
New Face Model Nicole's Casual Stree...
Aui Ai Nang Ngarm Too Kra Jok (2011)
Photos: Miss Tourism 2012 Beauty Pag...
Pretty Models @ Yangon Expo and Car ...
ချစ်လို့ မ၀နိုင် မောင့်သက်ပိုင်
Photos: Once UponaTime in Universi...
Photos: Nay Ye' Mun's Ayeyarwady Thi...
Photos: 11th South East Asian Bodybu...
MAGCEAL FEET 13